Mogadishu Journal » Jabuuti, Itoobiya ,Uganda iyo Koonfurta Suudaan oo ku heshiiyay inay dhistaan qad isku xira
Jabuuti, Itoobiya ,Uganda iyo Koonfurta Suudaan oo ku heshiiyay inay dhistaan qad isku xira
Mjournal :-Dalalka Jabuuti, Itoobiya ,Uganda iyo Koonfurta Suudaan ayaa gaaray heshiiskii u horreyay oo ay ku doonayaan inay ku dhistaan qad isku xira caasimadohooda.
Shir labo maalmood socday ayaa lagu soo afjarayay kormeerka lagu sameeyay hirgelinta qadka.
Dhinacyada ay quseysay waxay ka doodeen waxyaabihii lagu soo jeediyay kormeerka iyo xalka dhismaha oo ay fulin doonto shirkad deggan fadhigeedu yahay Nairobi, inkastoo dowladda Kenya aysan qeyb ka ahayn.
Shirka oo lagu qabtay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayay dhinacyada ku saxiixdeen heshiiska fulinta, waxaana goobjoog ka ahayd IGAD,sida ay ku warrantay warbaahinta Fana ee Itoobiya.
Baaritaanka hordhaca ah ayaa muujinaya in dhaqaale xoog leh laga heli doono qadka isku xirka ah ka dib marka la hirgeliyo. Waxaana hadda laga fikirayaa sidii loogu gudbi lahaa qeybta fulinta mashruuca.
Madaxweynaha Jabuuti ayaa horey u sheegay in Soomaaaliya ay ka digtoonaato isbedelka gobolka ee Itoobiya ay hor keceyso. Hadase waxa ay u egtahay in iskaashigii uu Geelle uga digayay Soomaaliya uu galayo mid la mid ah.
Madaxweynaha Somaliland oo Cafis u fidiyay 517 Maxbuus
Faahfaahin wiil dhalinyaro ah oo lagu dilay Muqdisho
Puntland oo faahfaahisay Khasaaraha ka dhashay roobab dabeylo wata by Ahmed Ali - Sat Dec 7th 12:27:42
Tiro dad ah oo lagu dilay weerar lagu qaaday gaari Bas ah iyo Al-Shabaab oo sheegatay by Ahmed Ali - Sat Dec 7th 9:23:01
Doodda Xildhibaanada ee Sharciga doorashooyinka Qaran oo meel xasaasi ah maraya by Ahmed Ali - Sat Dec 7th 7:55:54
Wararkii ugu dambeeyay roobab dabeylo watay oo ka da’ay deegaano ka tirsan Puntland by Ahmed Ali - Sat Dec 7th 7:50:00
Ku dhawaad 10 ruux oo lagu dilay weerar lagu qaaday gaari Bas ah by Ahmed Ali - Fri Dec 6th 19:29:50